Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyadda Doxa/Qatar oo xaflad soo dhaweyn ah u sameeyey agaasimaha HWF
Maamulka Jaaliyadda Doxa/Qatar oo xaflad soo dhaweyn ah u sameeyey agaasimaha HWF
Maamulka Jaaliyadda S.Ogadenya ee dalka Qatar ayaa xaflad soo dhweyn ah u sameeyay Agaasimaha Hogaanka Warfaafinta oo socdaal hawleed ku yimid Qatar. Xafladda oo ay ka soo qaybgaleen xubnaha maamulka jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada OYSU ee Qatar ayay labada dhinac ku kala warqaateen.
Ugu horeyn waxaa wacdi yar oo diini ah ka jeediyay goobta shirka Sh. Maxamad C/hi isagoo ku baraarujiyay xubnaha meesha fadhiyay inay Ilaahayna ka cabsadaan isla markaana u midoobaan halganka ay ku jiraan ee xaqqa ah. Sheekha ayaa si fiican uga waramay khaladaadka diiniga ahee ay ku dhaceen nimankii cadawga isu dhiibay oo sida hadda laga soo sheegayo buu yidhi Sheekha isugu biya shubtay inay danahooda ku mashquulaan isla markaana dad badan oo shacab ah dhibaatooyin u gaystay.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay hadalka Agaasimaha oo warbixin dheer ka siiyay shirka hawlaha ka socda Yurub gaar ahaan iyo guud ahaan dibadaha. Wuxuu ka sheekeeyay dibad baxyadii ugu dambeeyay ee jaaliyadaha ay ka dhigeen Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, banaanbaxyadaa oo hadda ay kala qayb qaataan dadka cadaanka ah ee wadamadaa u dhashay ka dib markii la fahamsiiyay qadiyadda shacabka Ogadenya iyo dhibaatada uu gumaysiga ku hayo shacabka. Waxaa kaloo uu agaasimaha ka warbixiyay hawlaha Warfaafinta iyo heerarkii uu soo maray warfaafinta halganka, isagoo ahaa ragii ugu horeeyay ee asaaskii idaacadda RX ka mid ahaa. Wuxuu agaasimaha ka codsaday dadkii meesha fadhiyay in dagaalka warfaafinta laga wada qayb qaato oo qofwalba uu noqdo wariye madaxbanaan oo la shaqeeya HWF.
Intaa ka dib waxaa la siiyay warbixino ku saabsan jaaliyadda Doxa iyo heerarkii ay soo martay, heerka ay hadda mareyso jaaliyada iyo caqabadaha ku soo kordhay oy ka mid tahay rag culumo sheeganaya oo gumaysiga u shaqeeyanaya iyagoo qaarkood ayba yihiin jawaasiis dadka jaaliyadda ah ka gudbiya warbixino lagu dhibaateeyo eheladoodii.
Hogaanka Warfaafinta jabhadda oo ka mid ahaa xubnaha wax ka soo dhaweeyay Agaasimaha ayaa isguna ka xogwaramay heerka rafashada gumaysiga uu gaadhay, ka dib markuu ka quustay halganka shacabka S.Ogadenya inuu ku soo afjaro cudud ciidan iyo cadaadiska naxariisdarada ahee uu ku hayo shacabka. Wuxuu hogaanka ka waramay dacaayadaha gumaysiga iyo dagaalka uu kula jiro saxaafadda caalamka iyo midda halgankaba si aan loo ogaanin jabka joogtada ahee soo gaadha maalinwalba ciidankiisa ama aan loo ogaanin xad-gudubka xuquuqul insaanka ee ciidamadiisa iyo maxaysatada u qortay ay ku hayaan dadka shacabka ah een waxba galabsan.
Su’aalihii iyo jawaabihii ka dib, ayay xubnaha jaaliyadda waxay ka codsadeen agaasimaha inuu salaan iyo fariimo ka gaadhsiiyo jaaliyadaha uu dhex tagi doono.